मेडिकल कलेजका सञ्चालक को कस्ता ?
Home > फिचर न्यूज > मेडिकल कलेजका सञ्चालक को कस्ता ?
२७ असार २०७५, बुधबार फिचर न्यूज, राष्ट्रिय
काठमाडौँ २७ असार//पछिल्लो समय नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्ने होडबाजी नै चलेको छ। अझ राजनीतिक दलका नेताको आशिर्वाद र संरक्षण पाएर मेडिकल कलेजमा लगानी गर्नेको त लाइन नै लागेको छ।
यही मेडिकल कलेजको विवादले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी १५ औँ पटक जुम्लामा अनशन बसिरहेका छन्। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनको होडमा नेपाली कांग्रेसनिकटहरुले अन्यलाई पछि पारेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले सबै सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा आफ्नो चुनावी घोषणा पात्रमै उल्लेख गरेको छ। अर्कातिर डा. गोविन्द केसी मेडिकल कलेजहरु माफियाको चंगुलमा परेको भन्दै निरन्तर अनशन बसिरहेका छन्।
तर चाख लाग्दो कुरा केछ भने हाल सञ्चालित मेडिकल कलेजले २० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सकेका छन्। सरकारी मेडिकल कलेजले भने ८‍० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल भइरहेका छन्।
देशको राजधानीमा काठमाडौमा त मेडिकल कलेज टोल टोलमा पुग्ने अवस्था आइसकेको छ। तर, यहाँ पनि नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने या नदिने कुराले दुई ध्रुबमा विवाद बढाएको छ।
यसअघि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने सहमति केसीसँग गरेको थियो। तर वाम नेतृत्वको सरकारले केसीको माग आधारमा नभइ जनताको आवश्यकता र योजना आयोगको अध्ययनले मेडिकल कलेज कहाँ खोल्ने नखोल्ने कुराको टुंगो गर्ने अडान राख्दै आएको छ।
कति छन् त मेडिकल कलेज ?
नेपालमा हाल निजीस्तरबाट डेढ दर्जन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्। मेडिकल कलेजमा भारतसम्मका व्यापारीदेखि नेपालकै नेताहरु र उद्योगीले समेत लगानी गरिरहेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेजका मालिक खुलेआम राजनीतिमा सक्रिय छन्।
बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका प्रवन्ध निर्देशक डा. सुरेशकुमार कनौडिया नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध छन्। उनी स्थानीयस्तरमा कांग्रेसका नेताका रुपमा परिचित छन्।
२०७४ स्थानीय तहको निर्वाचनमा कनौडियाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसबाट निर्वाचन पनि लडेका थिए। कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचन लडेका कनौडियालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डा. धवलशम्शेर राणाले पराजित गरेका थिए।
उनी २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसका समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका थिए। चिकित्सक डा. कनौडिया पछिल्लो समय राजनीतिमा झनै सक्रिय भएका छन्। उनी एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालको अध्यक्षसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्।
नेकपाका नेता बसिरुद्धिन
पटक पटक विवादमा परेको नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्जका प्रबन्ध निर्देशक बसिरुद्धिन अन्सारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आवद्ध छन्। अन्सारी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका थिए।
उनी त्यस क्रममा संघीय समाजवादी फोरमका विजय सरवागीसँग पराजित भएका थिए। अन्सारीले २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचन लडेका थिए। उनी स्थानीय तह र संविधान सभाको दुवै निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।
सुनिल शर्मा कांग्रेसका नेता
त्यस्तै डा. सुनिल शर्मा नोबल मेडिकल कलेज, विराटनगरका अध्यक्ष हुन्। शर्मा सञ्चालक रहेको यो कलेज पनि पटक पटक विवादमा तानिने गरेको छ। शर्मा पनि कांग्रेसका नेता हुन्, कांग्रेसमा उनको पहुँच माथिल्लो तहसम्म छ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट शर्मा मोरङ क्षेत्र ३ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। शर्मा तत्कालीन नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकालसँग झिनो मतले पराजित भएका थिए।
उनले निर्वाचनका समयमा आफू चुनाव लडेको क्षेत्रमा नोबेल मेडिकल कलेजको तर्फबाट स्वास्थ्य शिविरको अभियान नै चलाएका थिए। पछिल्लो समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित सांसद ढकालभन्दा शर्मा बढी खटिरहेका छन्। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य शिवर सञ्चालन गर्नेदेखि स्थानीयसँगको भेटलाई शर्माले तीव्रता दिइरहेका छन्।
राजेन्द्र पाण्डे एमाले नेता
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मनमोहन मेमोरियल मेडिकल काठमाडौंका अध्यक्ष हुन्। उनी तत्कालीन एमालेबाट सांसद निर्वाचित भएर पटक पटक मन्त्री समेत भइसकेका छन्।
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३ बाट प्रदेश सभा सदस्यसमेत पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। पाण्डेले प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीको समेत दाबेदारी गरेका थिए।
नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंका अध्यक्ष डा. भोला रिजाल नेपालका चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ हुन्। डा. रिजाल चाबहिलस्थित ओम अस्पतालका संस्थापक समेत हुन्। उनले नेपालमा टेष्टट्युवबाट बच्चा जन्माउने प्रविधि नेपालमा भित्र्याएका हुन्।
डा. रिजाल गीत लेख र गायनमा पनि सक्रिय छन्। उनी नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसकेका छन्। डा. रिजाल यसअघि कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक समूहबाट चिकित्सक संघको अध्यक्षसमेत भइसकेका छन्।
डा. ज्ञानेन्द्र कांग्रेसनिकट
विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की पेशाले चिकित्सक हुन्। उनी राजनीतिरुपमा नेपाली कांग्रेससँग निकट मानिन्छन्। डा. कार्की बेला बेलामा विवादमा आइरहन्छन्।
डा. कार्की र सुनिल शर्मा मिलेर सुरुमा नोबेल मेडिकल कलेज स्थापना गरेका थिए। तर विवाद भएपछि शर्माले नोबेल मेडिकल कलेज हत्याए। त्यसपछि कार्कीले विराट मेडिकल कलेज स्थापना गरेका हुन्। कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका भाइ हुन्।
चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा. हरिशचन्द्र न्यौपाने पेशाले सर्जन हुन्। कांग्रेस निकट न्यौपाने पहिले बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा कार्यरत थिए।
डा. न्यौपानेको उक्त मेडिकल कलेजमा अहिले पनि ६० प्रतिशत अर्थात बहुमत सेयर छ।
भारतीय भी नटराज
भारतीय लगानीमा रहेको कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवनलाई हरेक दलले नेताले स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाएका छन्।
उक्त मेडिकल कलेजमा नेकपा र कांग्रेस दुवैको बलियो पँहुच छ। नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल उक्त मेडिकल कलेजको कानुनी सल्लाहकार हुन्। सांसद पोखरेल, लोकमानसिंह कार्की र नेकपा नेता माधवकुमार नेपालसम्मले आफ्ना उक्त मेडिकल कलेजमा छोराछोरी पढाएका छन्।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’का भाइ नारायण दाहालले पनि यो मेडिकल कलेजबाट सुविधा लिने गरेको चर्चा पटक पटक सुनिने गरेको छ।
चितवन मेडिकल कलेजको नौ विघा जग्गा वार्षिक ९ लाख भाडा दिएर उक्त मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको छ। सस्तो भाडा उपलब्ध गराउनसमेत राजनीतिक नेताले नै सहयोग गरेका छन्। त्यही क्षेत्रमा
१३ धुर जग्गा भाडामा लिनेले मासिक ४ लाख रुपैयाँ भाडा तिरिरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालको पालामा यो कलेजले अनुमति पाएको हो।
खुमा अर्याल कांग्रेसकै
डा. खुमा अर्याल गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका अध्यक्ष हुन्। अर्याल युर्निभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन्। उनको ४ वटा मेडिकल कलेजमा सेयर छ ।
अर्यालले गत मंसिरको संघीय निर्वाचनमा कांग्रेसकोतर्फ उम्मेदवारको दाबेदरी समेत गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवालाई आकर्षक रकम दिँदा पनि टिकट नपाएको भन्दै उनले गुनासो पोखेका थिए। उनले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा स्याङ्जाबाट उम्मेदवारीको दाबेदारी गरेका थिए। उनी चर्चित ठेकेदार समेत हुन्।
चन्दा र गोपाल पनि कांग्रेसकै
काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. चन्दा कार्की र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा अध्यक्ष गोपाल पोखरेल नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध छन्। किष्ट मेडिकल कलेज काठमाडौंका प्रिन्सिपल बलमानसिंह भने राजावादी कांग्रेसका रुपमा चिनिन्छन्। उता मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा भने भारतीय लगानीको कलेज हुन्। annapurna post
प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन
विभिन्न दात्री संस्थाको सहयोगमा वीरगंज महानगर द्वारा कम्बल वितरण
प्रहरीलाई समाजमा ‘रोलमोडल’ बनाउने अभियानमा छु
कोशिश फाउन्डेसन द्वारा मानव सेवा आश्रमलाई कुर्सि हस्तान्तरण